Sida loo helo Netflix adiga oo aan lahayn kaarka deynta | Androidsis
Ignacio Sala | 03/08/2021 16:00 | Codsiyada Android, Streaming
Netflix wuxuu ku dhashay bakhaar fiidiyoow ah oo guriga keenay. Markii intarneedka uu kobcayay, Netflix wuxuu noqday madal fiidyow qulqul leh oo hadda jira in kabadan 200 milyan oo isticmaale waxayna ka jirtaa in ka badan 190 dal oo adduunka ah, marka laga reebo afar dal (Shiinaha, Crimea, Kuuriyada Waqooyi iyo Suuriya).
Si aad u hesho liisaska ballaaran ee Netflix u diyaariso macaamiisheeda, waxaa lagama maarmaan ah in la isticmaalo koontada lacag bixinta. Haddii aad rabto inaad ogaato sida loo helo Netflix bilaa kaarka deynta, hoosta waxaan ku tusaynaa dhammaan xulashooyinka hadda la heli karo.
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaad ogaato waa in maqaalkan aan ku tusin doonno dhammaan fursadaha sharci ee la heli karo. In kasta oo ay run tahay in internet -ka aan ka heli karno xisaabaadka sannadlaha ah ee madalkan qiimo aad u yar, akoonnadaas, inta badan, waa la xadaa ama waa la joojiyaa shaqada wax yar ka dib markii la shaqaaleysiiyo, markaa haddii aad rabto inaad lumiso lacag, horay u soco.
1 Waa imisa qiimaha Netflix
1.1 Qorshaha aasaasiga ah
1.2 Qorshaha Heerka
1.3 Qorshaha Bilaashka ah
2 Heshiis Netflix adiga oo aan lahayn kaarka deynta
2.1 Kaarka deynta
2.2 Kaararka hadiyadaha
2.3 La wadaag xisaab
2.4 Kaarka ficil ahaanta
2.5 Waxaa qoray Paypal
2.6 Biilkayaga taleefanka
2.7 Biilasha iyada oo loo marayo dhinacyada saddexaad
2.8 Isticmaal xilliga tijaabada bilaashka ah
3 Ha isticmaalin habab sharci -darro ah
Waa imisa qiimaha Netflix
Netflix ayaa diyaar noo ah 3 nooc oo rukunka ahMid kasta oo ka mid ah wuxuu na siiyaa faa'iidooyin kala duwan, marka waa inaan tixgelinaa labada waxa uu na siinayo iyo qiimaha aan rabno inaan bixinno. Qiimayaasha mid kasta oo ka mid ah qorshayaasha aan hoos ku tusayo, waxay u dhigantaa Ogosto 2021.
Qorshaha aasaasiga ah
Qorshaha aasaasiga ahi wuxuu noo oggolaanayaa hal ciyaar oo isku mar ah (hal qof oo keliya ayaa isticmaali kara madal), wuxuu noo oggolaanayaa inaan soo dejisanno aaladda oo aan bixinaynin tayada HD. Qiimaheedu waa 7,99 euros.
Qorshaha caadiga ahi wuxuu na siinayaa 2 taran oo isku mar ah, 2 qalab oo lagu soo dejisto waxyaabaha ku jira si loogu ciyaaro offline iyo tayada HD. Qiimaheedu waa 11,99 euros.
Qorshaha Bilaashka ah
Qorshaha Premium ayaa ah midka ugu dhammaystiran, maadaama ay na siiso tayada Ultra HD (4K), illaa 4 shaashad si loo helo waxyaabaha isla mar ahaantaana ah 4 aalad oo lagu soo dejisto waxyaabaha. Qiimaheedu waa 15,99 euros.
Heshiis Netflix adiga oo aan lahayn kaarka deynta
Kaararka amaahda waxay la xiriiraan taariikhdeena bangiyada, maadaama ay noo saamaxeyso dayn ku iibso oo aad bixiso dhammaadka bisha ama dib u dhigto iibsiyada. Haddii aynaan awoodin inaan helno koonto amaah ama aan doonaynno inaan bixinno khidmadaha xadgudubka ah ee ay bangiyada qaarkood qaadaan, waxaan dooran karnaa kaarka deynta.
Kaararka deynta ku dallaci xaddiga wax iibsiga waqtiga macaamilka, sidaa darteed waa inaan ku xisaabtamnaa inaan dheelitirnaan ku filan ku leenahay koontada kahor bixinta billaha ah ee soo noqnoqda ee kiiska Netflix.
Ikhtiyaar xiiso leh oo qandaraas ku siinaya Netflix adigoon isticmaalin kaarka deynta ayaa ah inaad isticmaasho kaararka hadiyadda. Kaararka hadiyadaha waxaa ka mid ah dheelitirka oo la cuno bil kasta iyadoo lagu saleynayo qorshaha lacag -bixinta ee aan dooranay.
Kaararka hadiyadda ee Netflix waxaa loo isticmaali karaa labadaba koontooyin cusub sida xisaabaadka jira. Marka dheelitirku dhammaado, waxaad heli doontaa farriin kugu martiqaadeysa inaad beddesho habka lacag -bixinta ama inaad iibsato kaar hadiyad kale ah.
Kaararkaan hadiyadeed ee Netlix ayaa laga heli karaa tubaakada, wargeysyada, Mark Media, Game iyo Logista kuwa kale.
La wadaag xisaab
Mid ka mid ah hababka ugu jaban ee lagu qoro Netflix iyada oo aan sidoo kale la isticmaalin kaarka deynta ayaa ah inaad la wadaagto akoon asxaabta ama qoyska. Xaaladahan, qorshaha ugu badan ee lagu taliyey Premium, maaddaama ay u oggolaanayso illaa 4 qof inay si wada jir ah u galaan madasha.
Qorshahan waxaa lagu qiimeeyaa 15,99 euro, kaas oo loo qaybiyey afar qof waxay ku kacaysaa 4 euro (wareegsan) ilaa bisha. Intaa waxaa dheer, haddii aanaan daryeelin bixinta lacag bixinta laakiin aan u wakiishanno isticmaaleyaasha kale ee koontada, baahida loo qabo isticmaalka kaarka deynta ayaa gabi ahaanba baaba'aysa.
Kaarka ficil ahaanta
Suuqa dhexdiisa waxaan haysannaa tiro badan oo ikhtiyaarro ah oo aan haysanno kaadhadhka lacag -bixinta hore, kaararka shaqeeya oo ku salaysan dheelitirka aan hore ugu darsannay. Kaararka noocaan ah ayaa ku habboon in lagu xakameeyo kharashka aan ku bixinno adeegyada qaarkood iyo sidoo kale in laga iibsado intarneedka bogagga internetka ee aan nagu dhiirrin kalsooni badan.
Waxaa qoray Paypal
Qaab kale oo Netflix noogu diyaarinayso inaan ku bixinno adeegsiga goobtiisa waa PayPal. Si aad u isticmaasho PayPal looma baahna inaad haysato kaarka deynta ama debit (inkasta oo lagu taliyay) maadaama aan si toos ah ugu dallaci karno dhammaan kharashyada koontadayada bangiga.
Haddii aad macmiil u tahay:
Telco bikrad ah
Waxaad ku bixin kartaa rukunkaaga billaha ah qaansheegta hawlwadeenkaaga, qaansheegad si toos ah loogu soo shubo koontadayada bangiga.
Biilasha iyada oo loo marayo dhinacyada saddexaad
Ka sokow inaad awoodid inaad ku bixiso biilka taleefankeena billaha ah, Netflix waxay sidoo kale kuu oggolaaneysaa inaad ku qandaraasto adeegga iyada oo:
Xidhmada Movistar +
Xidhmada R Cable
Baakad telco oo bikrad ah
Haddii aad macmiil u tahay mid ka mid ah hawlwadeennadaas, waad ku joojin kartaa tan isku xirka si aad u aragto sida aad ugu kireyn karto ku dar lacag -bixinta billaha ah ee Netflix biilasha adeegyadaan.
Isticmaal xilliga tijaabada bilaashka ah
Nasiib darro, ikhtiyaarkan hadda lama heli karo badhtamaha 2020. Netflix ayaa meesha ka saartay bilaha tijaabada ee bilaashka ah in ay bixisay oo taa beddelkeeda, waxay siinaysaa bisha labaad ee is -qoritaanka dhammaan isticmaaleyaasha qandaraaska ku bixiya mid ka mid ah qorshayaasha lacag -bixinta ee kala duwan ee ay na siiso.
In kasta oo markii lagu dhawaaqay baajinta xilliga xorta ah, haddana shirkaddu waxay ku andacootay inay ahayd imtixaan oo laga yaabo in go'aanka uusan noqon mid joogto ah, haddana ma ahayn Haddii aad rajeynaysay inaad ku tijaabiso madalkan bisha bilaashka ah, waad illoobi kartaa.
Ha isticmaalin habab sharci -darro ah
Kuwo badan ayaa ah bogagga shabakadaha si ay u soo dejistaan ​​nuxurkii nagu casuumay inaan qandaraaska ku qaadno Netflix iyada oo loo marayo habab aan weligood nala sharraxin laakiin u taagan kayd weyn marka la qandaraassanayo sannad buuxa. Marna nama soo sheegaan asalka xisaabaadka noocan ah, laakiin inta badan kiisaska, Kuwani waa xisaabaad la xaday.
Ahaanshaha xisaabaadka la xaday, marka milkiilaha koontada uu garto in koontadooda la isticmaalayo oggolaansho la'aan, waxay bedelaan furaha sirta ah lacagtiina waan luminay in aan bixin lahayn. Qaar baa noo xaqiijinaya in ay beddeli doonaan koontada haddii ay shaqada joojiso, laakiin ay tahay dhaqan sharci darro ah, tag oo cabasho.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Streaming » Sida loo helo Netflix iyada oo aan haysan kaarka deynta